Uyicwangcisa njani iShishini lezoThutho eliPhumeleleyo eliNika iNzuzo elungileyo: Iindaba zeSikolo sangoku
Uyicwangcisa njani iShishini lezoThutho eliPhumeleleyo eliNika iNzuzo elungileyo
Kufakwe kuyo amanqaku by Abasebenzi bokuhlela ngoJuni 18, 2021
Ishishini lezoThutho: Ngaba uyafuna ukwenza imali ngokuhambisa abantu kunye nempahla ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye? Ukuba ewe, eli nqaku liza kukukhokela malunga nendlela yokuqalisa ishishini lezothutho.
Ukuqala kwishishini lezothutho kufuna ukuba uthathe isigqibo sokuba loluphi uhlobo lweshishini ocinga ukulenza, elibandakanya ukuqasha ibhayisekile, inkonzo yeetaxi, inkonzo ye-limousine, iinkonzo zothutho ezikhethekileyo, umnini / umqhubi wetrakhi, inkampani ehambayo, ukuhambisa elwandle, ukuthuthwa kwemfuyo, ukuhambisa amaphenyane, ukuthuthwa komoya, ukuhanjiswa kwezonyango okanye iinkonzo zabantu abadala.
Ukuseka inkampani kufuneka kugqitywe kwimfuno kwaye ukhuphiswano kwindawo othatha isigqibo sokusebenza kuyo.
Nje ukuba uqikelele ukuba ufuna ukuhambisa ntoni, kuyakufuneka ucwangcise ukuba uza kuzinika njani ezi nkonzo.
Amanyathelo endlela yokuQalisa ishishini lezoThutho
1. Chonga uhlobo lweShishini oLifunayo
Ngaba kukuphela kobunini bezakhiwo, iNkampani enamatyala athile, okanye iqumrhu ofuna ukuliqhuba? Nganye kwezi ineempawu zayo ezilungileyo.
Ke yenza uphando lwakho kwaye ufumanise ukuba loluphi uhlobo olufunayo, njengoko nganye ineemfuno ezahlukeneyo ezizalisekiswayo.
2. Fumana iNombolo yeSazisi yeRhafu
Ukuba ufuna ukuqhuba ishishini elilodwa lobunini, ungasebenzisa inombolo yakho yokhuseleko lwentlalo. Ukuba yinkampani enkulu, kuya kufuneka ufumane umanyano Inombolo yesazisi somqeshi (EIN).
Eli nani liya kukuvumela ukuba ubhalise ishishini lakho kwaye usete inqanaba lakho lerhafu kurhulumente. Nawuphi na umqeshwa omqeshileyo kufuneka asebenzise eli nani xa efayilisha irhafu, njengoko eli nani lichonga ishishini lakho koorhulumente nakarhulumente.
3. Bhala iSicwangciso soShishino
Isicwangciso sakho seshishini kufuneka sibandakanye igama lenkampani yakho, uhlobo lweshishini oqala ngalo, kunye nendawo elikuyo ishishini lakho.
Kuya kufuneka uze negama leshishini, emva koko ubhalise igama lakho kwishishini kunye noNobhala Welizwe kwilizwe lakho.
Isicwangciso sakho seshishini sinokubandakanya:
Iinjongo ezichaziweyo zeshishini lakho.
Isicwangciso sendlela oza kuzizisa ngayo iinkonzo zakho.
Inkcazo yemali yakho
Inkcazo yeendleko zakho, ukuya kwiindleko zomsebenzi, ukugcinwa kunye neenjongo zenzuzo.
Amagama alo naliphi na ilungu labaphathi, kubandakanya lonke ulwazi lokunxibelelana.
Khumbula ukuba a cwangciso so shishino luxwebhu olusebenzayo olunokutshintsha ngokuhamba kwexesha. Xa uqala ishishini, isicwangciso seshishini lakho sisishwankathelo sento ofuna ukuyenza kunye nendlela oza kuyenza ngayo.
4. Fumana iLayisensi yakho yoShishino
Jonga i-ofisi yedolophu ekufutshane nawe ukufumanisa ukuba loluphi uhlobo lwephepha-mvume oza kulidinga ukuqhuba ishishini lakho ngokusemthethweni.
Kuya kufuneka ukuba ubhalise ishishini lakho kuNobhala Welizwe. Jonga iwebhusayithi yakho yolwazi, kwaye ungathandabuzi ukunika iiofisi zabo umnxeba wesikhokelo xa kukho imfuneko.
Iindidi zeShishini lezoThutho
Oku kulandelayo ngamanye amashishini ezothutho onokukhetha kuwo:
1. Inkonzo yeetaxi
Ukubhalisa njengomqhubi, qala ngokuya kwiwebhusayithi ka-Uber, kwaye ucofe kwindawo ethi "Yiba ngumqhubi". Uya kucelwa ukuba uphendule iphepha lemibuzo elifutshane eliqala inkqubo.
Njengomqhubi, usebenzisa eyakho imoto, ke iindleko zokuqalisa ziphantsi kakhulu.
Uber ujongana nayo yonke imiba yemali yokukhwela. Intlawulo kumqhubi iqhubeka veki nganye. Njengeekhontrakthi ezizimeleyo, abaqhubi bathatha iindleko eziphezulu (igesi, isondlo, i-inshurensi, njl.
Iwebhusayithi yohlalutyo lwezezimali iSherpaShare ithi abaqhubi be-Uber kuyo yonke indawo (ngaphandle kwesiXeko saseNew York apho amaxabiso aphezulu) benza malunga ne- $ 8.80 ukuya kwi-11 yeedola ngeyure yonke ngaphambi kokuba kuthathwe ipesenti ka-Uber.
2. Ishishini lezoThutho lonyango
Uthutho lwezonyango lubalulekile ishishini uthutho. Zininzi iindlela zokujonga kule shishini. Ezinye azidingi ngaphezu kwesithuthi esiqhelekileyo, iphepha-mvume lokuqhuba kunye nengxelo eqinileyo yokuqhuba.
Unokugxila ekuthutheni abantu abadala baye kwiindawo zonyango, okanye, ukuba uhlala kwindawo ekude nesixeko, unokugxila ekuqhubeni abantu imigama emide ukuya kwiindawo zobungcali kwizibhedlele ezikumgangatho wehlabathi.
Ukuba unelayisensi ye-EMT, ezinye iziqinisekiso zonyango, okanye uzimisele ukuzifumana, ungaqala ishishini elinesivumelwano nezibhedlele zokuqhuba abaguli abangeniswe kwamanye amaziko onyango ukuze bafumane unyango olukhethekileyo.
Oku kuya kufuna izixhobo ezizodwa njengokuhanjiswa kweoksijini kwaye mhlawumbi nesithuthi esinokuhambisa isigulana kwisitulo esinamavili.
3. Inkonzo yeeLimousine
Ii-Limousines azisenamda kwiimoto ezoluliweyo zeCadillac kunye neLincoln. Ezi ntsuku zelimos zibandakanya i-Hummers emide, iiRolls Royce zeediliya, kunye nezithuthi ezinemixholo eshushu eyakhelwe-ngaphakathi, iipianos ezinkulu (ezigqityiweyo nepiyano), kunye nemixholo yedisco, egcwele ibhola yesipili kunye nomgangatho wokudanisa omncinci.
Kwiindawo ezininzi eunited States nase Canada, ishishini elilodwa kunye nelayisensi yokuqhuba eyaziwayo njenge layisenisi yokuqhuba kufuneka isebenze ngenkonzo ye limousine kwaye iqhube isithuthi.
Ke ngoko, qiniseka ukujonga kwimigaqo kwindawo yakho ngaphambi kokwenza naluphi na utyalomali.
Ukuba awukwazi ukufumana ipleyiti ye-limousine unokukwazi ukuyithenga enye ukuba iyathengiswa, kodwa lindela ukukhupha imali eninzi, ukuya kuthi ga kwi-100,000 yeedola.
Amacwecwe e-Limousine kunye neelayisensi zifunwa kakhulu, ikakhulu kuba akuqhelekanga ukuba abaqhubi bafumane umvuzo wamanani amathandathu.
4. Ishishini lokuThutha
Kukho inani elikhulu lempahla engeniswa elizweni efuna ukuhanjiswa kwiidolophu nakwizixeko ezininzi de bafikelele kubathengisi abancinci kunye nabathengi bokugqibela.
Itraki kunye nokuhanjiswa kweenqanawa zezona zinto zibalulekileyo zidibanisa ukungenisa ngaphakathi, ukuvelisa kunye nokulima iimpahla kubathengi bokugqibela njengathi. Ngaphandle kwezi lori zomthwalo onzima kunye neetanki, urhwebo ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile lumiswe.
5. Ishishini loThutho loLwandle
Kuba ezothutho ezindleleni zezona zisetyenziswa njengezothutho kwihlabathi liphela, uthungelwano lwendlela esele lukhona kunye neziseko zophuhliso alwanelanga ukugcina uxinzelelo olukhulu.
Ngapha koko, ukuxinana kweemoto okujamelene nabakhweli kwezinye zeedolophu ezinkulu zehlabathi kukhokelela koosomashishini ukuba babonelele ngenye indlela yezothutho ezindleleni.
Uthutho lwamanzi luhlala luyenye yezona ndlela zixhaphakileyo kwaye zingasetyenziswa gwenxa kwezothutho kwihlabathi liphela elisaphuhlayo.
6. Ishishini lokuThutha imfuyo
Olu hlobo lweshishini lezothutho aludingi naliphi na iphepha-mvume elithile lokuhambisa ihashe lobuqu kubathengi, ngaphandle kokuba ungena kushishino lobungakanani bezorhwebo oya kuthi ngokuqinisekileyo udinge amava alinganayo okanye eenkomo kubathengi abanokubakho ukuthembela kwisakhono sakho sokuhambisa izilwanyana zabo, kwaye kufuneka ukuziqhelanisa nemigaqo yezothutho yemfuyo yokuwela imigca yelizwe.
Nangona umnini-mfuyo uya kuba noxanduva lokuba isilwanyana sakhe sikulungele ukuthuthwa ukuya apho siya khona, uya kufuna ukuyazi imigaqo yemfuyo yalo naliphi na ilizwe oza kungena kulo.
Uninzi lwamazwe lunezona mfuno zisezantsi zeemvavanyo ezithile ezosulelayo (kubandakanya novavanyo lwempilo) kunye / okanye nogonyo ngaphambi kokungena kurhulumente.
Ukuqashwa kweQela laseDangote lezixhobo zoLwakhiwo loMlawuli Jikelele we2018
Iingxaki kunye nethemba lokuFunda ngokuFutshane kwiiKholeji zezeMfundo zeFederal kuMmandla oMntla-Ntshona, eNigeria
Inkuthazo yeRhafu yokuHlaziya uPhuhliso lwaMashishini kunye noHlumo lwezoqoqosho eNigeria
Abagcini maxesha Abaqeshi bamazwe ngaMazwe Ukuqeshwa 2020/2021 Ifom yesicelo seFortal
Isaziso se-UNILORIN kubafundi ukuqala kwe-2018/2019 yeSeshoni yeziFundo jonga iinkcukacha
Ulwabiwo-mali lwaBafundisi abaNgoku 2021/2022 Ifom yesicelo seFortal
Abahlohli beYunivesithi yaseLagos State bajoyine i-ASUU Strike Strike
tags: Isicwangciso seshishini lothutho lwebhasi, Isicwangciso seshishini kwishishini lezothutho eNigeria, isifundo esinokwenzeka kwishishini lezothutho eNigeria pdf, Ishishini lothutho lwaseburhulumenteni eNigeria, Isindululo seshishini lothutho eNigeria, Ishishini lezothutho ezindleleni eNigeria pdf, ezothutho kushishino e-abuja, ezothutho kushishino nigeria nairaland
« Uhlelo lokuGcina ootitshala ngo-2021: 10 IiNkqubo zoMgangatho oMangalisayo zoTitshala
Amanqaku ali-18 okonwaba ngam Wonke umntu angathanda ukwazi »
IFomu yesicelo seLottery Visa yaseBrazil 2020/2021 kunye nendlela yokufaka isicelo
I-Maurid Poly HND kunye neFom yoKwamkelwa kweFomu ye-2021/2022 yeSeshoni yezifundo
Umnyhadala wematriki Umhla wama-2021/2022 weSeshoni yezifundo
Nge-2021 ka-Agasti ka-XNUMX oQiqayo oXolelweyo wokuCacisa indlela oziva ngayo Uxolo
Nge-Agasti 2021 Umyalezo omnandi wokuzalwa kukaMama wokuBhiyozela uMama wakho
Umahluko phakathi kweDiploma yeSikolo esiphakamileyo kunye neSatifikethi seZikolo eziPhakamileyo
U-Ernst kunye noMncinci (i-EY) Ukuqeshwa kwakhona kwe-2021/2022 kuHlaziyo lweSicelo samva nje
I-Ernst kunye neNcinci (i-EY) kwiZithuba zeZithuba zeJob 2021 www.ey.com
Imisebenzi ye-NGO eNigeria 2021 Jonga iZithuba zomsebenzi zikaJulayi zamva nje
Ukungena kweNpower Portal npvn.npower.gov.ng/login 2021/2022 Ukufikelela kwiAkhawunti
Imisebenzi ye-NGO eNigeria 2021/2022 Uhlaziyo: Jonga iimfuno zokufaneleka
Umbane Jikelele waseNigeria uQeqeshwe ngaphakathi kwi-2017 | Isikhokelo seSicelo se-GE kunye neemfuno
Imisebenzi ye-PhD eNigeria 2021 Jonga iZithuba ezi-10 eziphezulu zeZithuba ze-PhD Holders
Iindleko zeKhefu kwiLwimi lwaseKosovo 2021, imali yeVisa kunye namaziko abakhenkethi
www.npower.gov.ng I-Portal yokungena ngokuSemthethweni 2021